A: Ny orinasa misy anay dia any amin'ny distrikan'i Dongli any Tianjin, Sina.
F: Inona no tombony azonao?
A: (1) .We dia orinasa manana traikefa famokarana sy fanondranana mihoatra ny folo taona
(2) .Manana atrikasa manokana momba ny endriny, atrikasa fandokoana, ary atrikasa izahay
(3). Famolavolana matihanina sy ekipa R&D, afaka mamolavola andalana sy vokatra ho an'ny mpanjifa
(4). Akaikin'ny seranan'i Tianjin, miaraka amin'ny fahombiazany avo lenta, dia afaka manampy ny mpanjifa mamonjy entana
(5). Serivisy avo lenta sy ara-potoana
A: Voninahitra ho anay ny manolotra anao santionany amin'ny fizahana kalitao. Maharitra 3-4 herinandro eo ho eo ny fanomanana ny bisikileta santionany aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola feno azonao.
A: Ny MOQ anay dia container 1 * 20ft, ny maodely sy ny loko dia azo afangaro ao amin'ity fitoerana ity, mazàna izahay mangataka MOQ isaky ny modely / loko: 30pcs.
F: Manaiky ny baikon'ny mpanjifa OEM ve ianao?
A: Eny, afaka manao ny bisikileta mifanaraka amin'ny famaritana ny mpanjifa, ny loko mitambatra ary koa ny logo / endrika, ary koa ny fangatahana fonosana.
F: Manana ny vokatra ao anaty tahiry ve ianao?
A: Tsia. Ny bisikileta rehetra dia novokarina arakaraka ny baikonao ka anisany santionany.
Q. Inona ny toe-javatra misy ny kalitaon'ny bisikiletanao?
A: Ny zava-misy fa ny vokarinay dia kilasy antonony / avo lenta eo amin'ny tsena manerantany, manakaiky ny marika A manerantany. Raha, ny firenena samy hafa dia manana fari-pahaizana kalitao hafa, toy ny CPSC any Amerika, CE amin'ny tsena eoropeanina, ny kalitaon'ny bisikiletantsika dia mety hiova kely, araka ny fenitra sy ny lalàna any amin'ireo tany fivarotana.
A: Amin'ny ankapobeny, manangona ny entanay amin'ny baoritra volontsôkôlà tsy miandany izahay. Azontsika atao ihany koa ny mandray 85% fonosana baoritra tokana, fonosana 100% ary famonosana manokana araka ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
F: Ahoana no fomba fanaraha-mason'ny orinasao?
A: laharam-pahamehana ny kalitao. Manome lanja lehibe ny fifehezana kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faran'ny famokarana izahay. Ny vokatra rehetra dia hivory tanteraka ary hosedraina tsara alohan'ny hametrahana azy.
A: Eny, manana fitsapana 100% sy fizahana indroa nataon'i QC izahay alohan'ny fanaterana.
A: 1. 30% T / T toy ny petra-bola, ary mandanjalanja raha adika B / L. Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy fonosana alohan'ny andoavanao ny mizana.
2. 30% T / T toy ny petra-bola ary 70% alohan'ny fanaterana raha mampiasa ny forwarder na ny agents anao ianao. Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy fonosana alohan'ny andoavanao ny mizana.
3. L / C amin'ny fahitana
F: Inona ny fe-potoana alefanao?
A: Amin'ny ankapobeny, afaka 45-60 andro aorian'ny nahazoanao ny vola aloanao. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny habetsany sy ny fahasarotan'ny antsipirian'ny baikonao.
F: Azoko atao ve ny mifehy anao?
A: Eny, raha toa ka mahatratra habetsahana manokana ny bisikileta, bisikileta: 8000 pcs na bisikileta elektrika 5000pcs isan-taona, dia afaka mifidy anay ianao.
F: Inona ny antoka omena anao?
Batterie: 18 volana
Rafitra elektrika hafa: 1taona
Tana sy fork: 2taona
Fitaovana mekanika azo antoka momba ny fiarovana (toy ny kitondro, tsorakazo, fantsona fipetrahan'ny seza, crank): 1taona
Sombiny vaky (toy ny kodiarana anaty, fihazonana, lasely, pedal): Tsy azo antoka
A: 1. mitazona ny kalitao tsara sy ny vidin'ny fifaninanana izahay hahazoana antoka fa hahazo tombony amin'ny mpanjifanay;
2. Manaja ny mpanjifa rehetra amin'ny maha sakaizanay izahay ary manao raharaham-barotra amin-kitsimpo ary manao sakaiza amin'izy ireo, na avy aiza na avy aiza.